मोफसलमा बसेर लोक सेवा पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुराले पिरोलिरहेको छ भने …. « प्रशासन
मोफसलमा बसेर लोक सेवा पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुराले पिरोलिरहेको छ भने ….
प्रकाशित मिति : १३ पुष २०७४, बिहीबार ११:०८
यतिबेला लोकसेवाको सिजन छ । युवाहरु पलेटी कसेर पढ्न बसिरहेका छन् । कोही ट्यूसन धाउँदैछन् त कोही नजिकका चिनेजानेका कर्मचारीसंग कस्ता प्रश्न आउँछन् ? कसरी हल गर्ने ? कसरी लेख्ने ? कति लेख्ने ? के के पढ्ने ? लगाएत जिज्ञासाहरु सोधिरहेका भेटिन्छन् । यि त भए शहरका कुरा ।
तर लोकसेवा पास भएका जति सबै शहरीया मात्रै होइनन् । शहरमै बसेर पढेकाहरुले मात्रै पास गरेका छैनन् । राजधानीमै आएर पढेका मात्रै पास भएका मात्रै पनि छैनन् । अझ, निजामती कर्मचारीभित्र हेर्ने हो मोफसलमै बसेर राम्रो अंक ल्याएर उत्तिर्ण भएकाहरुको संख्या अत्याधिक छ । यति हुँदाहुँदै पनि मोफसलबाट सकिँदैन कि भन्ने जुन मोफसलका युवाहरुमा हुने हाउगुजी छ, अधिकांस युवाहरुमा रहेको त्यो खालको मनको डर हटाउन लोकसेवा सम्बन्धी पुस्तक लेखक तुल खड्काले सुर्खेतबाट केही सुझाव पठाएका छन् ।
मोफसलमा बस्ने धेरै युवाहरुमा लोकसेवा पास गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको हाउगुजी छ । उनीहरुले बजारमा धेरै अब्बल मान्छेहरू, कम्पिटेन्सी भएको मान्छेहरू छन् भन्ने सोच्छन् । तिनीहरूमा राजधानीमा गएर ट्युसन पढ्न नपाएकाले लोकसेवा पास गर्न सक्दैन भन्ने फिलिङ छ ।
कतिपयमा एसएलसी र १२ कक्षामा कम उत्र्तीणांक आएकाले पास गर्न सकिँदैन भन्ने फिलिङ छ । उनीहरूमा मनोत्रास छ । आफूमा कमजोरी देखाएर कहिल्यै पनि सफलता पाउन सकिँदैन ।
मान्छे हिजो के थियो भन्दा पनि आज के गर्दैछ भन्ने कुराले सफलता निर्धारण गर्छ । आज जहाँ बसेपनि पढ्ने विषयबस्तु एउटै हो । एउटै विषयबस्तुमा रहेर जहाँ बसेर पढ्दा पनि हुन्छ ।
सबै भन्दा ठुलो कुरा निरन्तरता, कटिबद्धता, विश्वास, लगनशिलता र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा रूची चाहिँयो । र त्यो संगै समय व्यवस्थापन अति महत्वपूर्ण छ । समयको व्यवस्थापन गर्न सक्ने मान्छेले जहाँ बसेर पनि मज्जाले पास गर्छ ।
लोकसेवा पढ्दै गर्दा विगतमा सोधिएका प्रश्नपत्रहरुलाई हेर्नुपर्छ । कहिले काहीँ कम प्रश्न सोध्नेबाट धेरै पढिएको हुन्छ र धेरै पढ्नुपर्ने ठाउँमा कम पढिएको हुन्छ । त्यसैले समय व्यवस्थापन नहुँदा बढी श्रम गर्नुपर्ने ठाउँमा कम भएको र कम गर्नुपर्ने ठाउँमा बढी भएको हुनाले प्रश्न त्यसरी सोधिदिँदाखेरी समय अपुग हुन पुग्छ ।
औसतमा सबैलाई बराबर टाइम दिन सकेर पढ्यो भने त्यसले मान्छेलाई सफलताको नजिक पुर्याउँछ ।
लोकसेवाको प्रश्न कसरी हल गर्ने ?
राजनीतिक भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी तरंग
यसरी गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण
२८ भाद्र २०७६, शनिबार ०८:३७
जीवनको एक मात्र लक्ष्य आनन्द प्राप्ति हो । सुखदुःख भनेका